Umgaqo-nkqubo wabucala-Abasebenzi abazizigidi
Nceda ufumane apha ngezantsi kuMgaqo-nkqubo wabucala weMillionMakers.com ("umgaqo-nkqubo wabucala").
Injongo yomgaqo-nkqubo wethu wabucala kukucacisa ngokucacileyo ngamagama alula nangendlela ethembekileyo, ebonakalayo necacileyo, indlela esilawula ngayo idatha yakho. Idatha yobuqu inokufunyanwa ngaphakathi kobume bokunikezelwa kwenkonzo, inkqubo yokhetho, ukufunyanwa kwenkonzo ebonelelwe nguwe okanye ukuba siyilawula le datha xa undwendwela iwebhusayithi yethu. Umgaqo-nkqubo wethu uqinisekisa ukukhuselwa kwamalungelo akho, ukugcinwa kwemfihlo kunye nokukhuseleka kolwazi osinike lona, ​​ngokuhambelana noxanduva olusemthethweni malunga nokukhuselwa kwedatha yomntu kwaye ngakumbi, ukuthobela uxanduva lokubonakala elubala. Kwimeko ekhethekileyo, singasebenzisa idatha yakho yobuqu ukwenza okanye ukukhusela ilungelo kwiinkqubo zomthetho.
Sinokwabelana ngeDatha yoBuntu ne
Iinkampani zethu zeQela.
Ulawulo loLuntu kunye neeBhodi xa irhafu, abasebenzi, ukhuseleko lwentlalo okanye nawuphi na omnye umthetho ofanelekileyo uyifuna.
Abaqeshi abanokubakho, iiarhente zokuqesha, amaqabane esithathu, iibhodi zezaziso zomsebenzi kunye nethuba lokufumana amathuba emisebenzi ukwandisa amathuba akho okufumana isikhundla esifanelekileyo.
Iinkampani ezilawula ukuqhubekeka kwedatha, njengabaxhasi ababonelela ngeenkonzo kuthi njengabacebisi bangaphandle kunye nabacebisi abaziingcali, amagqwetha, abaphicothi zincwadi, ababali, iibhanki / amaziko ezemali, iingcali zekhompyuter, iiarhente zokufudukela kwelinye ilizwe, izitshixo zokuhlola, iziqinisekiso kunye nokugwetywa kolwaphulo-mthetho xa bevela kwaye uhambelane nomthetho.
Ukutshintshelwa kwedatha yamanye amazwe kungathatha indawo yezenzo zangaphambili esiya kuthi sizilandele ii-APPs, iiCustom Contractual Conuses ezichasiswe yiKhomishini yaseYurophu kunye ne-EU-USA Shield yabucala yokuqinisekisa olo dluliselo lwenziwe kumazwe angenasigqibo saneleyo. evela kwiKhomishini yaseYurophu. Ngayiphi na imeko, umntu wesithathu ekwabelwana naye ngedatha ethile yobuntu buye baqinisekisa ngaphambili ukwamkelwa kwamanyathelo obugcisa kunye nombutho owaneleyo kukhuseleko lwayo oluchanekileyo.
Izinto ezixeliweyo zenziwa kuthi ngasese okanye kungenjalo ngokuhambelana nomthetho. Sithatha amanyathelo afanelekileyo kwiimeko zokuqinisekisa ukuba naliphi na iqela lesithathu esivelileyo kulo ulwazi sobuqu liyaphatha ulwazi lwakho lobuqu ngokuhambelana ne-GDPR kunye nomthetho wabucala.
Ukukhuselwa kweDatha yakho
Siphatha amanyathelo obuchwephesha kunye nawombutho afunekayo ukugcina inqanaba elifunekayo lokhuseleko kunye nokugcinwa kwemfihlakalo ngokubhekisele kwidatha egciniweyo kwaye ngendlela efanayo, sibeke indlela eyimfuneko ukuthintela konke okusemandleni ethu, ukusetyenziswa okungafanelekanga, ukufikelela okungagunyaziswanga, ukulungiswa okungekho mthethweni, ukususa kunye ilahleko yedatha
Lo mgaqo-nkqubo wabucala usebenza kwi www.millionmaker.com, eyeyakho kwaye iqhutywa yiMM LLC. Lo mgaqo-nkqubo wabucala ucacisa indlela esiqokelela kwaye sisebenzise ngayo ulwazi lomntu osinika kwiwebhusayithi yethu. Ikwachaza nokhetho olufumanekayo kuwe malunga nokusebenzisa ulwazi lwakho, nendlela onokuthi ufikelele kwaye uluhlaziye ngayo olu lwazi.
1. Ukuqokelelwa kolwazi kunye nokusetyenziswa
Siqokelela ezi nkcukacha zobuqu zilandelayo kuwe.
Iinkcukacha zonxibelelwano, ezinjengegama lakho, idilesi ye-imeyile, idilesi ye-imeyile kunye nenombolo yefowuni.
Ulwazi lwentengiso, idilesi yendawo yokuhlala kunye nedilesi yokuhlawula.
Ulwazi malunga neshishini lakho, njengegama lenkampani, idilesi, uhlobo lweshishini kunye nomnini / abaxhamli.
Ulwazi olungeniswe nguwe malunga nendawo kaJobe, eyahlulwa, yenethiwekhi yentlalo, iarhente yokuthengisa, kunye nezinye iinkonzo ngumbandela ozikhethele wona kwaye asithathi xanduva kuwo.
Singaqokelela ulwazi lomntu ngamnye xa usongeza amagama abathengi, abathengisi, ababoneleli ngeenkonzo, abaninizabelo okanye abaxhamli kwiifom zethu zoku-odola. Ukuqokelelwa kolwazi lomntu wesithathu kungaziwa ukuba kungafuneka kuqhubekiswe kwaye kubhaliswe iodolo yakho kwiimveliso ezithile okanye iinkonzo. Asiyi kulusebenzisa olu lwazi ngayo nayiphi na enye injongo yokuthengisa. Aba bantu besithathu banokuthi banxibelelane nathi info@millionmaker.com ukusicela ukuba sisuse olu lwazi kwiziko ledatha.
Sisebenzisa ulwazi esiluqokelelayo:
Gcwalisa iodolo yakho.
Sithumela isiqinisekiso somyalelo.
Vavanya iimfuno zeshishini lakho ukuze ubone iimveliso ezifanelekileyo.
Thumela kuwe imveliso okanye ulwazi olucelwayo.
Phendula izicelo zenkonzo yabathengi.
Thumela kuwe unxibelelwano.
Phendula iinkxalabo zakho kunye nemibuzo.
2. Ukwabelana ngolwazi
Siza / sabelana ngolwazi lwakho nomnye umntu ngeendlela ezichazwe kulo mgaqo-nkqubo wabucala. Asisoze sithengise ulwazi lwethu lomntu ngamnye.
Sinokubonelela ngolwazi lwakho lobuqu kwiinkampani ezibonelela ngeenkonzo zokusinceda ngemisebenzi yethu yeshishini (umzekelo; ukuqhuba iodolo yakho / intlawulo, iinkonzo zokungena kwelinye ilizwe, inkonzo ye-visa, imvume yokusebenza, ukubonisana ngemfundo, ukuthenga / ukuthengisa ishishini esele likho, ukubhalisa ishishini lakho, ukulayisenisa, ukuvula iakhawunti yebhanki, ukukhutshwa kweeakhawunti okanye ukubonelela ngenkonzo yabathengi). Ezi nkampani zigunyazisiwe ukuba zisebenzise ulwazi lwakho lobuqu kuphela xa kufanelekile ukubonelela ngezi nkonzo.
Amanye amaphepha ethu asebenzisa "ubuchule bokuyila" ukuhambisa umxholo kuye nakubanikezeli beenkonzo zethu (njengeprosesa yokuhlawula) ngelixa kugcinwa inkangeleko kunye nokuziva kwesi siza. Nceda uqaphele ukuba unikezela ngolwazi lwakho lomntu siqu kumntu wesithathu kwaye ungabi www.millionmers.com.
Iphepha elichazayo ngezomthetho
Sinokuveza iinkcukacha zakho:
Njengoko kufuneka ngokomthetho, njengokuthobela isamani, okanye iinkqubo zomthetho ezifanayo.
Xa sikholelwa, sithembekile, ukuba eso sibhengezo siyimfuneko ukukhusela amalungelo ethu, ukukhusela ukhuseleko lwakho okanye ukhuseleko lwabanye, ukuphanda ngobuqhetseba okanye ukuphendula isicelo sikarhulumente.
Ukuba sibandakanyeka kudibaniso, ukufunyanwa, okanye ukuthengiswa kwayo yonke okanye kwinxalenye yeasethi yethu (kwimeko apho uya kuthi waziswe nge-imeyile kunye / okanye ngesaziso esivelelekayo kwiwebhusayithi yethu ngalo naluphi na utshintsho lobunini okanye ukusetyenziswa kolwazi lwakho lomntu , ngokunjalo, naluphi na ukhetho onokuba nalo malunga neenkcukacha zakho).
Kuwo nawuphi na umntu wesithathu, ngemvume yakho yangaphambili.
3. Khu seleko
Sizimisele ukubonelela kwelona nqanaba liphezulu lokhuseleko kunye nemfihlo. Zonke izinto ezenziwayo kwi-Intanethi, kubandakanya ukulungiswa kwentlawulo yamakhadi okuthenga ngetyala, kwenziwa ngokukhuselekileyo kusetyenziswa itekhnoloji, exhaswa yibrawuza yakho, evimba lonke ulwazi oluthunyelwe kuthi. Sithatha lonke ukhuseleko ukukhusela ulwazi lwakho lomntu ekulahlekelweni, ukukhululwa, ukufikelela okungagunyaziswanga, ukusetyenziswa gwenxa, ukutshintsha okanye ukutshutshiswa kwaye ugcine ulwazi lomntu buqu kuphela ngenjongo osinike zona.
I-GDPR (uMgaqo woKhuseleko lweDatha ngokubanzi) ingxelo
Ukukhusela iinkcukacha zakho ezixabisekileyo, yonke idatha egcinwe kuvimba wethu, nokuba ikwi-intanethi okanye ngaphandle kweintanethi, iya kukhuselwa ngokuhambelana ne-EU's GDPR (General Data Protection Regulation Link to European Union law), eqala ukusebenza ngoMeyi 25, 2018.
I-MM LLC ayiqokeleli kwaye isebenze yedatha ngaphandle kokuba inikezwe nguwe ngokuzithandela. Siyathembisa ukulandela ngokungqongqo ukhuseleko lwamazwe kunye nemilinganiselo yokukhuselwa ngasese.
Sithumela kuphela olona lwazi lufanelekileyo kwiiNkonzo zoMfuduko, iiNkonzo zeZemfundo, iiNkonzo eziManyeneyo, iirhafu kunye noPhicotho, amathuba oShishino, abanjwe ngesandla liqela lethu labazinikeleyo, ngabantu ababuxabisayo ubumfihlo bolwazi lomntu.
4. Ukukhangela iteknoloji / iikuki
Icookie yifayile yokubhaliweyo encinci egcinwe kwikhompyuter yomsebenzisi ngeenjongo zokugcina irekhodi. Sisebenzisa ikuki kwindawo yethu. Asilunxibelelanisi ulwazi esilugcina kwii-cookies kulo naluphi na ulwazi oluchazayo olufaka kule ndawo.
Sisebenzisa zombini ii-cookies ze-ID zeseshoni kunye neicookies eziqhubekayo ukulandela indlela yokuziphatha komsebenzisi kunye nokugcina ulwazi olufaka kwiifom zethu. Icookie ID yeseshoni iyaphelelwa xa uvala isikhangeli sakho Icookie eqhubekayo ihlala kwihard drive yakho ixesha elide. Ungasusa ii-cookies ezingapheliyo ngokulandela umkhombandlela onikwe kwisikhangeli "soncedo" sakho se-intanethi. Ukuba uyala iicookies, usenokuyisebenzisa le ndawo, kodwa amandla akho okusebenzisa iindawo ezithile kule ndawo yethu anokulinganiselwa.
Ukujolisa kwenjongo / ekujolisweni kwakhona
Sisebenzisana kunye nothungelwano lomntu wesithathu ekuboniseni intengiso kwindawo yethu okanye ukulawula intengiso yethu kwezinye iisayithi. Umlingane wethu wentengiso usebenzisa iicookies kunye neebhikhoni zewebhu ukuqokelela ulwazi olungazifanekiyo malunga nemisebenzi yakho kwiwebhusayithi yethu kunye nezinye iiwebhusayithi, ukubonelela ngentengiso ekujolise kuyo ngokusekelwe kumdla wakho.
Iibhikhoni zewebhu / ii-gifs
Sisebenzisa itekhnoloji yesoftware ebizwa ngokuba zii-gifs ezicacileyo (ii-web beacons) ukusinceda sikwazi ukulawula umxholo kwiwebhusayithi yethu ngokusazisa ukuba ngowuphi umxholo osebenzayo. Cacisa ii-gifs yimizobo emincinci enesazisi esahlukileyo, esifana nokusebenza kwiicookies kwaye zisetyenziselwa ukulandelela iintshukumo ezikwi-intanethi zabasebenzisi bewebhu. Ngokuchasene neicookies, ezigcinwe kwikhompyuter kwihard drive yomsebenzisi, ii-gifs ezicacileyo zifakelwe ngokungabonakaliyo kumaphepha ewebhu kwaye zimalunga nobungakanani bokumisa okupheleleyo ekupheleni kwesi sivakalisi. Asilubopheleli ulwazi oluqokelelwe zii-gifs ezicacileyo kulwazi lwabathengi bethu oluchongiweyo.
Iifayile zohlalutyo / log
Siqokelela ulwazi oluthile ngokuzenzekelayo kwaye silugcine kwifayile yelog. Olu lwazi lubandakanya idilesi yakho ye-intanethi ye-protocol (i-IP), uhlobo lwesikhangeli, umnikezeli weenkonzo ze-Intanethi (ISP), ukubhekisa / ukuphuma kwamaphepha, inkqubo yokusebenza, isitampu somhla / ixesha, kunye nedatha yokucofa.
Sisebenzisa olu lwazi, olungachongi abasebenzisi abathile, ukuhlalutya imeko, ukuphatha indawo, ukulandela umkhondo wabasebenzisi bejikeleze indawo yethu kunye nokuqokelela ulwazi malunga noluntu ngokubanzi. Asiyidibanisi nale datha eqokelelwa ngokuzenzekelayo kulwazi oluchaziweyo.
Ukusetyenziswa kwetekhnoloji yokulandela umkhondo ngabanikezeli beenkonzo, amaqabane ethekhinoloji okanye ezinye izinto zeqela lethu kwisiza sethu (ezinjengezo zibandakanyekayo ekulandeleleni impumelelo yentengiso) ayigutyungelwanga kulo mgaqo-nkqubo wabucala. La maqela esithathu anokusebenzisa iicookies, gifs ezicacileyo, imifanekiso kunye nezicatshulwa zokubanceda ukuphatha ngcono imixholo yabo kule ndawo. Asinakho ukufikelela okanye ukulawula kwezi teknoloji. Asizibopheleli ulwazi oluqokelelwe ngamaqela esithathu kwiinkcukacha zabathengi okanye zomsebenzisi.
5. Khu seleko
Ukhuseleko lolwazi lwakho lomntu ubaluleke kakhulu kuthi. Xa ufaka iinkcukacha ezibuthathaka (ezinje ngekhadi letyala, ikhadi lebhanki okanye ulwazi lweshishini lokushicilela) kwiifom zethu zokwenza iodolo, sibhala ngokuhambisa olo lwazi kusetyenziswa ubuchwepheshe obukhuselekileyo bobuchule (SSL).
Silandela ngokubanzi imigangatho eyamkelweyo ukukhusela ulwazi lomntu siqu olungeniswe kuthi, zombini ngexesha lokuhambisa kunye nje sakube silufumene. Nangona kunjalo, akukho ndlela yothumelo kwi-Intanethi okanye indlela yogcino lwe-elektroniki, ikhuselekile nge-100%. Ke ngoko, asinakuqinisekisa ukuba ukhuseleko olupheleleyo. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga nokhuseleko kwindawo yethu, ungaqhagamshelana nathi kwa info@millionmaker.com.
6. Ulwazi olongezelelweyo
Amakhonkco kwiindawo zangaphandle
Le ndawo ibandakanya amakhonkco kwezinye iiwebhusayithi ezinokuthi iindlela zazo zabucala zahlukane nezethu. Xa ungenisa iinkcukacha zakho nakweyiphi na kwezo sayithi, ulwazi lwakho lulawulwa yimigaqo-nkqubo yabo yabucala. Siyakukhuthaza ukuba ufunde ngononophelo umgaqo-nkqubo wabucala wayo nayiphi na iwebhusayithi oyindwendwelayo.
Amawijethi eendaba ezentlalo
Iwebhusayithi yethu ibandakanya imithombo yeendaba ezentlalo (umzekelo, i-facebook, i-twitter, njl njl. Ezi zinto zinokuqokelela idilesi yakho ye-IP kunye neliphi iphepha olindwendwelayo kule ndawo, kwaye inokusetha ikuki ukuba isebenze ngokufanelekileyo. Iimpawu zosasazo lwezeNtlalontle kunye neewijethi zinokubanjwa ngumntu wesithathu okanye zibanjwe ngokuthe ngqo kwiwebhusayithi yethu. Ukunxibelelana kwakho nezi zinto kulawulwa ngumgaqo-nkqubo wabucala wenkampani ebabonelelayo.
Sinokubonisa ubungqina bobuqu babathengi abonelisekileyo, ukongeza kwezinye iindlela, kwisiza sethu. Obu bungqina butsalwa kumnikezeli ngenkonzo wesithathu, onokubuza kulwazi lwakho, kubandakanya igama lakho kunye nedilesi ye-imeyile. Nangona singathumeli ulwazi oluchaziweyo kwesi siza, ukuba unqwenela ukuhlaziya okanye ukucima ubungqina bakho, nceda unxibelelane nomlawuli wedatha.
Utshintsho kulo mgaqo-nkqubo
Sinokuhlaziya lo mgaqo-nkqubo wabucala ukubonisa utshintsho kwiinkqubo zethu zolwazi. Ukuba senza naluphi na utshintsho lwezinto ezibonakalayo, siya kukwazisa ngesaziso kule ndawo ngaphambi kokuba utshintsho luqale ukusebenza. Siyakukhuthaza ukuba ujonge eli phepha ngalo lonke ixesha ukufumana ulwazi lwamva nje malunga nemfihlo.
Phawula* Njengomgaqo-nkqubo, asabelana okanye sithengise idatha yabathengi bethu kunye naye nawuphi na umntu wesithathu, kude kube ngaphandle kokuba inkonzo ekhethiweyo yenziwa ngamaqabane ethu, amahlakani, ababoneleli beenkonzo. Iinkcukacha zakho zigcinwa ziyimfihlo ngokungqongqo ngokomgaqo-nkqubo wethu wabucala.
Ukukhathalela ukwakha kunye nawe engqondweni
Njengomlingani wezizwe ngezizwe, siyaxhobisa abathengi bethu ukuba bakhule ngokukhawuleza kwaye
kakhulu ngokuzinzileyo ngokukuphakamisa kumzila wakho wokukhula.